China yakazvimirira suction chifukidzo fekitari uye bhizimisi Zhongxing
Inopinza donje bhora donje swab
Disposable zvokurapa chivharo
Chiremba murwere kuchengetedza pad
Kurapa donje swabs
Disposable zvokurapa ngowani
Kuzvitsvetera firita mask
Yako-yega priming firita yekudzivirira mask ine basa rekusefa asiri-oiri zvikamu zvakaita seguruva, utsi, mhute uye microorganisms; inopihwa mune isina-chena fomu. Iyo yekushomeka kwemweya kushoma iri pasi pe110Pa, iko kusefa kwekuchenesa kweasina-oiri zvikamu zvinopfuura 95%, uye kugona kwekutsvaira kwebhakitiriya kunopfuura 95%.
Ichi chigadzirwa chakakodzera kuzvidzora-kwekutanga kusefa kusefa kweasina-oiri zvikamu zvakaita seguruva, acid mhute, pendi mhute, microorganisms uye zvichingodaro mumhepo.
Kuzvimirira kurongedza masiki ekuvhiya ekurapa
Masiki ekuvhiya ekurapa 50 mapakeji
Yako-yega priming firita yekudzivirira mask ine anotevera maitiro:
1. Rukoko rwekunze rwemaski rwakagadzirwa neasina-chepfu polypropylene zvinhu, izvo zvinonyanya kuve mvura-inodzora isina-yakarukwa machira;
2. Iyo yemukati mechifukidzo inonyanya kugadzirwa neisina-chepfu polypropylene zvinhu, ES inopisa-mhepo donje uye viscose isiri-yakarukwa jira ine yepedyo mweya kukwana;
3. Iyo firita chinhu chemaski inotora maviri matete e-Ultra-yakanaka yakanyungudika-yakaridzwa isina-yakarukwa jira iro rakagadziriswa nemagetsi, uye iyo yebacteria kusefa kusefa kunosvika zvinopfuura 95%;
4. Ipurasitiki yemhino clip mumasikiri muviri inogona kugadziridzwa paunoda panguva yekupfeka maitiro, uye inokodzera uye yakagadzikana kupfeka;
5. Iyo mitatu-mativi dhizaini yemask, iyo yekufema kuramba panguva yekupfeka ishoma pane 110Pa, haina kumisidzana;
6. Ichi chigadzirwa chinoshandisa musono kumucheto kudzvanya tekinoroji uye Ultrasonic yekutengesa tekinoroji kugadzira iyo mask yakapfava, yakasimba uye yakanaka.
Yekuzvidzora-yega sefa yekudzivirira masiki anonyanya kushandiswa kuchengetedza vanhu munzvimbo dzine mhepo inoshatiswa nezvisiri-mafuta zvikamu zvakaita seguruva, utsi, mhute uye tupukanana. Maitiro makuru ekushandisa ndeaya:
Mashandisiro aungaita N95xx earband akateedzera masks:
1. Vhura pasuru ubudise maski, mhino clip kunze, dhonza tambo imwe nzeve nemaoko maviri, ita shuwa kuti mhuno yemhino iri kumusoro, sezvakaratidzwa mumufananidzo 1 pazasi;
2. Pfeka chifukidzo, isa chirebvu chako mukati mechifukidzo, uye bhanhire tambo dzakasungwa shure kwenzeve dzako nemaoko maviri, sezvakaratidzwa muMufananidzo 2 pazasi;
3. Chinja panzvimbo yakasununguka kuitira kuti mask ienderane nechiso, sezvakaratidzwa mumufananidzo 3 pazasi
4. Dhinda indekisi uye zvigunwe zvepakati zvemaoko maviri kuti uchinje iyo yemhino clip kusvika yave padyo nezambuko remhino, sezvakaratidzwa muMufananidzo 4 pazasi.
5.Nguva imwe neimwe paunopfeka mask uye wopinda munzvimbo yebasa, iwe unofanirwa kuita cheki yekuomesa. Maitiro ekuongorora ndeyekuvhara zvakakwana mask yekudzivirira nemaoko ako uye nekukasira kubuda nekukurumidza, sezvakaratidzwa mumufananidzo 5 pazasi. Kana paine mweya unodonhedza padyo nemhino clip, tevera nhanho 4) Gadzirisa iyo yemhino clip kusvika pasisina mhepo inodonha.
Uchishandisa nzira yeN9501 headband dzakateedzana mask:
1. Vhura pasuru yacho ubudise masiki, simudza divi remasikisi nemhino clip, gadzira mhino kumusoro, uye bhanhire remusoro rinorembera zvakasikwa, sezvakaratidzwa mumufananidzo 1 pazasi;
2. Pfeka chifukidzo, isa chirebvu mukati mechifukidziro kuitira kuti ive padyo nechiso, shandisa ruoko rumwe kupfuura nepakati pemabhande maviri emusoro, wobva washandisa rumwe ruoko kutanga kudhonza bhande repazasi kuseri kwemusoro uye isa iyo pamutsipa, Sezvinoratidzwa mumufananidzo 2 pazasi;
3. Dhonza bhanhire repamusoro kumusana kwemusoro uye riise pamusoro pezeve dze nzeve dze kumashure kwemusoro, sezvakaratidzwa pamufananidzo 3 pazasi;
4. Dhinda indekisi uye zvigunwe zvepakati zvemaoko maviri kuti uchinje iyo yemhino clip kusvika yave padyo nezambuko remhino, sezvakaratidzwa muMufananidzo 4 pazasi;
5.Nguva imwe neimwe paunopfeka mask uye wopinda munzvimbo yebasa, iwe unofanirwa kuita cheki yekuomesa. Maitiro ekuongorora ndeyekuvhara zvakakwana mask yekudzivirira nemaoko ako uye nekukasira kubuda nekukurumidza, sezvakaratidzwa mumufananidzo 5 pamusoro. Kana paine mweya unodonha padyo nemhino clip, tevera nhanho 4) Gadzirisazve iyo yemhino clip. Kana mhepo yarova iripo yakatenderedza, gadzirisa bhanhire remusoro uye dzokorora nhanho 1) kusvika 4) kudzamara isisabude.
Chigadzirwa zita Yekuzvimiririra-yega sefa yekudzivirira mask
Muenzaniso N9501 Earband Type / N9501 Headband Rudzi
Magadzirirwo 180mm×120mm / 160mm×105mm / 140mm×95mm
Chigadzirwa Chigadzirwa Shaohu
Mashoko polypropylene isina-yakarukwa machira, ES inopisa mweya donje
Bhakitiriya filtration chiyero ≥95 muzana
Firita chiyero cheasina-oiri zvikamu ≥95%
Inoenderana neyakajairwa nhamba GB 2626-2019
Kurongedza Specification pepa-repurasitiki bhegi kurongedza, 1 chidimbu pabhegi
Rinoshanda Dzivirira zvisina-oiri zvikamu zvakaita seguruva, utsi, bvungapfunga uye tupukanana
Mavambo Jiangsu, China
Mugadziri Huaian Zhongxing Pharmaceutical Technology Co, Ltd.
Pashure: Disposable isiri-yakarukwa masiki ekurapa
Zvadaro: 84 inouraya utachiona
Bhuruu Inoraswa Mask
Inoraswa Medical Chiso Mask
Inoraswa Medical Mask
Disposable Muromo Mask
Medical Rinoraswa Mask
Pink Inoraswa Mask
Nhatu-Rukoko Sterilization Mask
Chiremba chekudzivirira mask
Disposable isiri-yakarukwa masiki ekurapa
Chiremba chekuvhiya mask
Inoraswa Medical Chiso Mask, Antiviral Mask, Sterilized Cotton Swab, Mhepo Inofema, Chiremba Cotton, Nursing Pad,
Kwete. 33-8, Shanyang Avenue, Economic Development Zone, Huaian Dunhu, Huai'an Guta